Liverpool oo garaacday 10 cayaariyahan oo kooxda Crystal Palace ah kulankii ugu dambeeyay cayaaraha Premier League Todobaadkan+SAWIRRO – Gool FM
CR Shariif August 20, 2018
( Premier League ) 20 Agoosto 2018. Kooxda Liverpool ayaa guul dirqi ah ka gaartay dhigeeda Crystal Palace kaddib kulan ku dhamaaday 2-0 oo guusha ay kku qaaday kooxda ka dhisan garoonka Anfield.
Kulanka ayaa lagu kala nastay 2-0 qeybta hore cayaarta oo ay ku hogaamineysay naadiga Liverpool waxaanu ahaa rigoore uu daqiidadii ugu dambeeysay qeybta koowad uu dhaliyay James Milner.
Reds ayaa u suura galin dhawr isku day oo goolka Crystal Palace ay ku bartilmaameed sadeen kuwaa oo qaar kamida uu badbaadiyay goolhayaha.
Dib markii loogu soo laabtay kaambiyaha dambe naadiga Crystal Palace ayaa dhankooda sameeyay wax xoogaa firfircooni ah balse dadaalkooda cayaareed ma dhaaf siisaneen daafaca Reds.
Mo Salah ayay u suura galin inuu kulankan gool ka dhaliyo balse fursad u muutay inuu gool ku dhalin karo ayaa waxaa dhanka gadaale ka jilaafeeyay mid kamida xiddiga Crytal Palace kasoo cayaarta casaan ka qaatay markii ay mareysay daqiqadii 74 waa laacibka lagu magacaabo Aaron-Wan Bissaka.
Kulanka oo u muuqan karay mid ay Liverpool halka gool kaliya ay guusha ku raaceyso ayaa laacibka Sedo Mane u dhaliyay Reds goolka labaad daqiiqadihii dheeriga ee kulanka lagu daray waxayna ugu dambeeyn dheesha u idlaatay 2-0.
Liverpool ayaa haatan leh 6 dhibcood labad kulan ay cayaartay horyaalka waxayna yihiin kaalinta labaad dhanka kala sareynta maadama kooxda City ay farqiga goolasha y ku heyso hogaalka horyaalka.